Réseau Malina 27 Febroary 2019 3448 vues
Nosoratan'i Judith Rakotovao sy Riana Raymond
Olona dimy ambin’ny folo mizaka ny zom-pirenena sinoa no naiditra am-ponja vonjy maika ao amin’ny fonjan’i Toamasina nanomboka ny 5 febroary teo. Misy roa amin’izy ireo namoahana filazana fampikarohana satria nandositra rehefa nahazo famindran-toerana ara-pahasalamana. Ireo olona ireo dia tantsambo ao amin’ilay sambo sinoa atao hoe« Flying Panama MD963051 » nohazomina tany amin’ny fari-dranomasin’Antalaha tamin’ny volana desambra teo. « Min Feng » no anaran’io sambo io hatramin’ny 2017, ary efa voarohirohy tamin’ny raharaha fitaterana andramena an-tsokosoko avy aty Madagasikara.
Ireo tantsambo fito ambin’ny folo dia miasa ho an’ny orinasa LIAN HUA INTERNATIONAL TRADE L.T.D, an’andriamatoa YANG JIAN FENG, araka ny fanambaran’ireo voampanga nandritra ny fakana am-bavany azy momba ny asan’ny Flying.
Na izany aza, mbola tsy nisy fanenjehana an’ireo teratany sinoa ireo navoaka noho izy mety ho voarohirohy amin’io fanondranana an-tsokosoko hazo sarobidy io : “Anjaran’ny Fitsarana manokana momba ny andramena no miandraikitra an’izany”, araka ny fanazavan’ ny mpampanoalalànan’ny Repoblika ao Toamasina Thierry Lauret RAJAONA, tamin’ny resaka mitokana nataony. Noho ny fanajana ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana, ity tompon’andraikitra voalohany amin’ny fandrindrana sy fitantanana ny fanadihadiana ity dia nandà ny hifampiresaka amin’ny mpanao gazety. Ny vaomieran’ny famotorana izay tarihiny dia ahitana zandary, polisy, mpiasan’ny fadintseranana ary mpiasa ao amin’ny Sampan-draharahan’ny Seranan-dRanomasina sy Renirano (APMF). Tsy nanaiky fifampiresahana ny Mpampanoalalànan’ny Repoblika, fa nohamafisiny taminay kosa ny vesatra telo anenjehana ireo tantsambo 17 ireo, vaovao azonay mialoha avy amin’ny mpanao ny famotorana: “Ny anenjehana ireo Sinoa dia noho ny fandalovany nampiahiahy, nandà ny baiko nomena, ary diso nefa nandositra. Mbola mitohy ny fanadihadiana ary miandry ny fitsarana isika. Raha te hahazo ny hevitry ny fitsarana ianareo dia mifandraisa amin’ny sampan-draharaha miadidy ny serasera ato aminay.” Ireo fandikan-dalàna ireo dia sazian’ny andininy 7.5.16, 7.5 sy 7.5.15 ao amin’ny lalàna 99.028 mamaritra ny Fitsipiky ny fifamoivoizana an-dranomasina eto Madagasikara.
Ny sambo Flying giazana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina amin’izao fotoana izao.
Amin’izao ora anoratanay izao, mbola manjavozavo ny fiafaran’ilay fanadihadiana ary mampisalasala ny mikasika ireo olona miandraikitra ny antontan-taratasy. “Tena misy olana ny fifandraisana ary misy sakana noho ny fiteny tsy mitovy [eo amin’ny manam-pahefana mahefa sy ireo sinoa voafonja]. Tsy misy na inona na inona azony, matahotra izy sao dia fandrika ilay izy. Iharam-pahavoazana ireo Sinoa ireo, satria mpiasa tsotra fotsiny izy ireo, angatahiny ny hifandraisana amin’ny mpampiasa azy ary ireo no tokony hoenjehina.”, hoy ny mpisolovava azy ireo izay nangataka tsy hotononina anarana, satria tsy nahazo alalana tamin’ny lehiben’ny mpisolovava izay, araka ny teniny, afaka manome azy ny zo hiteny amin’ny maha mpisolovava mpiaro azy.
Mikasika ny tribonaly, tsy misy daty nolazaina na iray azy momba ny hanaovana ny fitsarana. Malina fatratra ny mpampanoalalànan’ny Repoblika satria mavesa-danja sy sarotra ny raharaha. “ Ny Praiministra NTSAY Christian tenany mihitsy no manara-maso akaiky an’ity raharaha ity, avy any aminy mivantana ny baiko. Na dia mbola tsy misy fitoriana momba ny andramena natomboka aza”, raha ny voalazan’ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ny ekipa mifangaro misahana ny raharaha.
Ao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy izay nampidirana ireo teratany sinoa, misy loharanom-baovao nilaza taminay fa misy fahatapahana goavana eo amin’ny fifandraisan’ny mpanao fanadihadiana sy ny fitsarana ary ny fitantanana ny fonja :”Tsy fantatray akory fa hampiditra ireo gadra vaovao ireo ry zareo. Ambonin’izany, tsy anananay ny vaovao ilaina mikasika an’io raharaha io. Sahirana be izahay amin’ny fifandraisana amin’ireo Sinoa. Ry zareo koa dia milaza fa iharam-pahavoazana noho ny lainga ataon’ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana. Raha ny fahalalako, nisy olona nilazany fa hafindra any amin’ny hotely ry zareo, ny sasany any amin’ny hopitaly. Manasarotra ny asanay izao toe-draharaha izao. Fantatrareo fa naneho ny hasosorany ny Sinoa. Ny alakamisy 7 febroary dia voatery nanao tifi-danitra izahay mba hifehezana ny toe-draharaha”, hoy ilay niresaka taminay.
Angatahin’ny Sinoa ny hanagadrana ny tompon’andraikitry ny orinasany.
Ireo tantsambo sinoa 15 dia teren-doza roa, araka ny fijoroana vavolombelona nangonina tany Toamasina. Ny mpampanoalalànan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny fonjan’i Toamasina, andriamatoa Christian RALAY, dia milaza fa tantsambo namita iraka fotsiny ihany ry zareo ary angamba tsy fantany akory izay tena antony marina nidirany taty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Ny mpisolovava azy ireo koa, izay natolotry ny fikambanan’ny Sinoa ao Toamasina, dia mankatoa tanteraka an’izany. Ho azy, ny lehibeny no tian’ireo Sinoa hampangaina, ary ry zareo dia mangataka ny hamonjana vonjy maika ny kapitenin’ny sambo sy ny lehiben’ny ekipa.
Ny Fivondronan’ny Fikambanan’ny Vehivavy sy ny Fampandrosoana na FAFED koa dia mitsikera ny fiainan’ireo tantsambo sinoa ireo ao am-ponja. Ilay ramatoa mpandrindra ny tetikasany, Maria ZAFITSARA dia nanao hoe:”Rariny sy hitsiny ny manam-pahefana malagasy raha miaro ny harena voajanaharintsika, saingy izahay amin’ny maha mpiaro ny zon’olombelona anay, dia mangataka, na izany aza, ny hanajana ny zon’ireo Sinoa ireo, mety hampisy korontana eo amin’ny diplomasia mantsy io, na koa mety hitera-doza fotsiny izao eo amin’ny fiainan’ireo voampanga. Sady araka ny vaovao voalohany nangonin’ny fikambananay dia tsy nisy fanondranana andramena tratra ambodiomby”.
Momba ny hoe tratra ambodiomby, nisy mpiasa ambony iray ao amin’ny fitsarana, izay tsy nanaiky hotononina anarana, nilaza taminay fa tsy nisy ny vesatra ahafahana manambara fa nisy ny fandikana ny lalàna momba ny andramena. Taorian’ny fisavana nataon’ny miaramilan’ny hery manokana rehefa nogiazany ilay sambo, ary taorian’ny an’ny mpanao famotorana mitambatra, dia tsy nahitana andramena na dia iray aza tao amin’ny lakalin’ilay sambo.
“Tena zava-dehibe tsy maintsy lazaina anefa fa misy faritra iray amin’ilay sambo tena notsinginina ary tsy nahazo alalana hamaky an’io ny mpanao famotorana”, mpiasan’ny fadin-tseranana sy zandary maro no nilaza izany taminay fony izahay nanao ity fanadihadiana ity. Tsy misy loharanom-baovao ofisialy afaka mijery ny antontan-taratasy nanamarina na nandiso izany vaovao izany. Tsy afaka niditra tao anatin’ilay sambo izahay na dia teo aza ny fangatahana tamin’ny manam-pahefana mahefa hanao izany, ny famotorana natao ahafahana manoratra ity lahatsoratra ity dia tsy nahafahana nahafantatra ny anton’ny fandavana ny mpanao famotorana mba hisafo ny ao anantin’ilay sambo iray manontolo.
Ny mpitolona miaro ny tontolo iainana sy solontenan’ny firaisamonim-pirenena sasany dia tena resy lahatra fa nisy andramena nampidirina tao anatin’i Flying : “Izaho manokana, tsapako fa raharaha politika ity ary natao mba hahatsara endrika. Manahy mafy aho fa tsy ho ela io sambo io dia hanainga miaraka amin’ny andramena. Ny fiheverako dia mifototra amin’ny hoe tonga teto io sambo io mba haka ny hazo efa novononina hakarina an-tsambo. Mihevitra aho fa ao amin’ny Fanjakana ao mihitsy no misy mpiray tsikombakomba”, izany no ahiahin’i Gervais Randrianalison, Mpandrindram-paritry ny Fitambaram-Pirenen’ny Fanohinana momba ny Tontolo iainana na CNPE, ho an’ny faritr’Antsiranana sady indrindra prezidàn’ny Fikambanana Placaz, Alaotra Mangoro.
Ny fikambanan’ny firaisamonim-pirenena momba ny tontolo iainana Alliance Voahary Gasy (AVG) dia nahazo alalana manokana avy amin’ny ministeran’ny tontolo iainana tamin’ny volana desambra teo mba hitsidika an’ilay sambo. Tsy nahita andramena tao na iray aza ireo iraka nalefany tany. “Nefa misy vaovao tokony hohamarinintsika mikasika ny mety ho fisian’ny hazo izay nety ho efa tao anatiny talohan’ny nanagiazana an’ilay sambo. Talohan’ny nidiran’ny miaramila an-tsehatra dia mety ho natsipin’ny tantsambo tany anaty ranomasina izy ireny,” hoy ny Filohany, Razakamanana Ndranto, taminay tamin’ny telefona.
Tahirin’andramena ao amin’ny biraon’ny Talem-Paritry ny tontolo iainana sy ny Fampandrosoana maharitra ao Toamasina
Kolikoly sy tsy fisian’ny mangarahara
Mangina aloha hatramin’izao ny manam-pahefana malagasy mikasika ny fivoaran’ny famotorana momba an’i Flying. Ny fanamarihana farany natao momba ity raharaha ity dia efa tamin’ny 19 desambra teo, nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety mikasika ny fanafihana sy ny fanagiazana ilay sambo notanterahina teo anatrehan’ny Praiministra, ny Ministeran’ny fiarovana sy ny Sekretera Jeneraly misahana ny zandarmaria tamin’izany fotoana. Nahatsikaritra io tsy fisian’ ny mangarahara io izahay nandritra ny fanadihadiana ifotony nataonay tany Toamasina sy teto Antananarivo. Tamin’ny anaran’ny zo hahazo hanovo vaovao no nagatahanay hihaona amin’ny mpanao famotorana sy hijery ny sambo Flying, nefa dia nolavin’ny zandarmariam-pirenena sy ny Mpampanoalalànan’ny Repoblika izany. Ny fanajana ny tsiambaratelon’ny famotorana sy ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana no nentin’ireo andrim-panjakana roa ireo nanamarina ny fandavany.
Any Toamasina, ireo sinoa dia nanjary ohatra ny “fiandronan’ny rihitra”. Araka ny loharanom-baovao azonay, ny tena atidohan’ity raharaha ity dia vehivavy antsoina hoe SUN TUNG LOCK RITA, izay nampahafantatra tamin’ny fomba ofisialy ny fananany tahirim-bolabolan’Andramena 3375 tamin’ny 2017 tany amin’ny tompon’andraikitry ny faritra SAVA. Ramatoa SUN TUNG LOCK dia mpandraharaha ara-toekarena monina ao Antalaha. Amin’io fanondranana an-tsokosoko andramena io, hono, izy dia toa hoe ampian’izany “FRE” izany, saingy tsy mbola fantatry ny mpanome vaovao anay aloha izay tena anarany hatramin’izao. Saingy araka ny fikarohana nataonay, misy an’izany Frédéric N. izany efa natao famotorana tany amin’ny Zandarmariam-pirenena ao SAVA tamin’ny 2017, araka ny PV LAH.15-GAPJ/SAVA ny 13 Febroary 2017 momba ny fanagadrana an’i FREDERIC N., J.R, R.C sy J.H noho ny fitaterana tsy ara-dalàna andramena sy firaisana tsikombakomba. Tamin’izany fotoana izany ireo olona efatra ireo dia notanana am-ponja vonjy maika tao amin’ny fonjan’Antalaha. Tompon-tsambo anankiroa no nety ho niantoka ny fitaterana ny hazo sarobidy : andriamatoa Olivier, tompon’i Ulrich, sy Patrick Maly, tompon’i Meva.
Na dia teo aza izany vaovao izany dia mbola tsy nisy fanenjehana nataon’ny manam-pahefana malagasy tamin’ireo olona ireo, noho ny antony maro.”, hoy ny fitarainan’izay tafaresaka taminay. Ny Mpampanoalalànan’ny Repoblika ao Toamasina, Thierry Lauret RAJAONA, dia nanipy teny kely tamin’ny resaka mitokana nifanaovanay taminy, mikasika ny fisian’ny mpiray tsikombakomba any an-toerana, saingy tsy nanome antsipiriany izy.
Herinandro vitsivitsy izay ny fitondrana vaovao dia nampigadra sy naka am-bavany mpiara-miasa akaiky taloha tamin’i Hery Rajaonarimampianina, toa an-dry Mbola Rajaonah na koa ny Ministry ny tontolo iainana taloha, Anthelme Ramparany. Toa hoe misy andraikitra mivantan’ireo olona ireo ato amin’ity raharaha Flying ity, raha ny voalazan’ny gazety mpiseho isan’andro, Midi Madagasikara, nivoaka tamin’ny 14 febroary teo. Manamafy ny gazety fa nanonona ny anaran’i Mbola Rajaonah ireo Sinoa tamin’ny fakana am-bavany azy. Dimy andro taorian’ny nanagadrana azy vonjy maika tao Tsiafahy, ny Bianco dia nilaza tamin’ny faran’ny herinandro teo fa ho tontosa afaka andro vitsivitsy ny antontan-taratasy momba azy. Ary farany, fifandrifian-javatra sa tsia, ny fisamborana niharihary an’i MAMINIRIANA Jean Eddy tamin’ny 12 febroary lasa teo noho ny fitrandrahana, fitanterana, fihazonana sy fivarotana andramena dia tsy mahagaga ny raharaha fanondranana an-tsokosoko hazo sarobidy izay nahavoasaringotra ny sambo Flyiny tamin’ny taona 2015, izay nitondra ny anarana hoe Min Feng tamin’izany fotoana izany.